Isikethi Sekhephu Elithambile Kunye Nelinzima
Isikethi Sekhephu Elithambile Kunye Nelinzima Isikhumba seqhwa sasekuqaleni sivele apha zoyilo olutsha kunye nolusebenzayo - kwi-mahogany enokhuni olunzima kunye nabagibeli besinyithi. Inzuzo enye kukuba iibhutsi zesikhumba zendabuko ngesithende zingasetyenziselwa, kwaye ngenxa yoko akukho mfuneko yeebhuthi ezikhethekileyo. Isitshixo sokuziqhelanisa nesketi, yindlela elula yokubopha, njengoko uyilo nolwakhiwo lwenziwe ngokudityaniswa okulungileyo nobubanzi besiketi. Omnye umba wokuthatha isigqibo kububanzi beembaleki ezenza ukuba abaphathi batyibilika kwikhephu eliqinileyo okanye elinzima. Iimbaleki zensimbi engenazitayile kwaye zixhotyiswe ngezikrelemnqa eziphindiweyo.
Ubume Bokukhanya Isibane sesithuba sesithuba seTensegrity sisebenzisa umgaqo weRBFuller 'ongaphantsi kokuninzi' ukuvelisa isicoci sokukhanya kusetyenziswa kuphela umthombo wayo wokukhanya kunye nocingo lombane. Ubungakanani bomhlaba buba yindlela yolwakhiwo apho bobabini basebenza ngokudibeneyo kunye noxinzelelo ukuvelisa intsimi ebonakala ngathi inganikezeliyo yokukhanya ichazwa kuphela yingqondo eyakhiweyo. Isidima sayo, kunye noqoqosho lokuvelisa luthetha kwimpahla yesimo esingapheliyo esimilo sayo esikhanyayo sinomtsalane wokudonsa amandla omxhesho ngokulula okuqinisekisa ubucukubhede bexesha lethu: Ukufezekisa ngakumbi ngelixa usebenzisa ubuncinci.
Isixhobo Esiguqukayo Semfundo
Isixhobo Esiguqukayo Semfundo Umfundi 108: Esona sixhobo siguqukayo sikaWindows 8 kwiMfundo. Isinxibelelanisi esitsha kunye namava amatsha okufunda. Abafundi abangama-108 bayi-straddles zombini kwiicwecwe zehlabathi kunye neelaptop, betshintsha phakathi kwezi zimbini, ukuze kube nokuphuculwa okwenziwayo kwezemfundo. IWindows 8 ivula amathuba amatsha okufunda, avumela abafundi ukuba basebenzise ngokupheleleyo inqaku lesikrini sokuchukumisa kunye nezixhobo ezingenakubalwa. Inxalenye yeZisombululo zeMfundo ze-Intel®, i-Pupil 108 isezona sisombululo sifikelelekayo nesifanelekileyo kumagumbi okufundela kwihlabathi liphela.
Itafile Yokutyela Itheyibhile yokutyela yenzelwe ukubonelela indawo yokuhlala abantu abasibhozo, abangenelela kulungelelwaniso lweentolo. Ngaphezulu yi-X engaqondakaliyo, eyenziwe ngamaqhezu amabini ahlukeneyo akhutshwe ngumgca onzulu, ngelixa i-X efanayo yokuhombisa ibonakala kumgangatho ngesiseko sesiseko. Isakhiwo esimhlophe senziwe iziqwenga ezintathu ezahlukileyo ukuze kube lula ukuhlangana kunye nokuhamba. Ngaphaya koko, umahluko we-teak veneer ephezulu kunye nomhlophe kwisiseko ukhethwe ukuba ukhanyise indawo engezantsi inikezela ukugxininisa ngakumbi kumphezulu ongalinganiyo wokwenza umgca, ngaloo ndlela unika ingcebiso yentsebenzo eyahlukeneyo yabasebenzisi.
Isixhobo Esikhawulezayo Semfundo
Isixhobo Esikhawulezayo Semfundo Dibanisa i-401: I-duo egqibeleleyo yezeMfundo. Masithethe ngomsebenzi weqela. Ngoyilo olu-2-1 ku-1 olwahlukeneyo ngokudibeneyo, Dibanisa ama-401 sisixhobo esifanelekileyo somfundi kwiimeko zokufunda ngokubambisana. Umdibaniso wethebhulethi kunye nencwadana inikezela isisombululo esona sinamandla semfundo, sixhotyiswe yimiklamo yoyilo ekhuselekileyo ngexabiso elifanelekileyo.
Sokuhlambela Isikethi Sekhephu Elithambile Kunye Nelinzima Ubume Bokukhanya Isixhobo Esiguqukayo Semfundo Itafile Yokutyela Isixhobo Esikhawulezayo Semfundo